Al-shabaab oo Gacanta ku Dhigtay deegaano hoos taga Eyl – Radio Daljir
Al-shabaab oo Gacanta ku Dhigtay deegaano hoos taga Eyl
Maarso 15, 2016 10:33 b 0
Bacaadweyn, Maarso 15, 2016 (Daljir) —Wararka deg deg ah ee aanu ka helayno degmada Eyl ee gobalka Nugaal ayaa sheegaya in saddex deegaan oo degmadaasi hoos taga ay soo gaareen dagaal yahanadii Al-Shabab ee xalay la wareegay gacan ku haynta deegaanka Garacad ee degmada Jariiban.
Qoobjooge ku sugan Eyl oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay xog ku hayaan in dagaal yahanadaasi hadda ku sugan yihiin deegaanada Maraya,Garmaal (Dongorayo) iyo Kabaal balse aan ilaa iyo hadda xog dheeraad ah laga heli karin, maadama dadka ku nool halkaasi ay cabsi ka qabaan in ficilo ay sameeyan kooxdaasi.
Ciidamadan Al-Shabab xooggooda hadda waxay ku sugan yihiin deeganaka Garmaaal halkaasoo ay saldhig ka dhigteen, waxaa kale oo degmada Eyl laga dareemayaa dhaq-dhaqaaq xoogan,waxana saldhig ku leh ciidanka badda Puntland hase yeeshee wax tilaabo oo ciidan Puntland ma aysan qaadin.
Wararka aanu helayno ayaa sheegaya in dadka ay waydiinayaan dhanka ay ka xigto degmada Qandala oo ka tirsan Gobalka Bari,waxayna dadku tilmaamayaan in xooggagan ay ku wajahan yihiin gobalka Bari.
Dhanka kale mamulka degmada Godobjiiraan ayaa sheegaya inay si hoose ula socdaan ciidan Al-Shabab ka tirsan oo dhanka lugta ah kaga soo socda dhanka deegaanka Kulub oo qiyaastii u jirta wax aan ka badnayn 50-KM.
Odayaasha deegaanka ayaa kullan deg deg ah ku yeeshaan degmada Eyl iyo deegaanka Qarxis, waxayna ka tashanayaan waxay ka yeeli lahaayeen haddii ay soo aadaan dhanka degmada Eyl iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan, waxaa la qiyaasayaa ilaa iyo hadda inay isku balaariyeen dhul qiyaastii gaaraya 40-KM.
Weli kooxda Al-Shabab kama aysan hadlin socdaalkooda xeebaha Puntland, waxaase la rumaysan yahay inay yihiin baxsan maadama looga awood roonaadey koonfurta Soomaaliya.